Hapana munhu anoda kubata dzihwa kana dzihwa, kunyanya kana iwe uri wiricheya mushandisi. Izvi zvinogona kusanganisa dambudziko zvakanyanya. Izvo zvinonyanya kuoma kuchengetedza mapapu ako uye bronchial machubhu akajeka achienzaniswa nevanhu vakajairwa. Kune zvakare hunowedzera njodzi yemabayo inoitika. Izvo zvakakosha kuti iwe uite chero zvazvinotora kuti usabata huturu kana dzihwa pakutanga.
Kugara Mune Hutano Hwakanaka
Paunenge uine hutano, immune system yako ndiyo yakasimba. Unogona kusimudzira kuramba kwako kubhakitiriya nemavhairasi kuchengetedza kwangu kwekugara uchirovedza muviri uye kudya kudya kunovaka muviri.
Wako physio Therapist kana chiremba anogona kukurudzira akakodzera maekisesaizi emamiriro ako ezvinhu. Mitezo yemvura ndiyo yakanaka sarudzo ye wiricheya vashandisi. Kune mitambo yakawanda yakagadziridzwa wiricheya zvinangwa zvaunogona zvakare kunakidzwa.
Kuve uri pasi pekushushikana kunogona kudzikisa kushomeka kwemuviri wako, asi kuita kufungisisa kana chiitiko chinozorodza iwe unogona kubatsira zvakanyanya. Kudzidzira kufema kwakadzika kunobatsira kuchengetedza mapapu akajeka.
Bvunza chiremba wako kana anoona nezvehutano maererano nechikafu chinozokubatsira kuti urambe uine huremu hwakanaka.
Shandisa majekiseni Okuzvidzivirira
Mishonga yekudzivirira furu inogona kuchinja kubva pagore kusvika kune rinotevera asi zvakakosha kuti utorwe nefuruu. Kana usina chokwadi chekutora mushonga wako kana iwe uchinetseka kuubhadhara, bata wako wemunharaunda Multiple Sclerosis Society kana Muscular Dystrophy Association kuti ubatsirwe.
Bvunza chiremba wako nezve pneumonia kupfura. Vazhinji vacho vanokurudzira kuitora makore mashanu ese.
Deredza Kuratidzira Kwako
Ive neshuwa yekuzivisa yako mhuri uye vadiwa kuti kubata dzihwa kana dzihwa idambudziko hombe kwauri. Vana vanogara vachiuya kumba netsikidzi kubva kuchikoro kana kana iwe uine wega wekubatsira mubatsiri, ivo vanogona kukuendesa nyore utachiona kwauri.
Kumbira kuti mubatsiri wako awane chirwere ichi. Kana muchengeti wako achirwara uye pasina mumwe munhu anokubatsira kunze, ita kuti ivo vapfeke mask uye iwe unofanirwa kupfeka imwe futi. Kugeza maoko nguva dzose kwakakosha kune wese munhu kusanganisira iwe.
Maitiro Ekubata Chando Kana Iyo Flu Kana Iwe Uchirwara
Gara kumba uzorore. Iwe unogona kubuda zvakare zuva mushure mekunge fivha yako yaenda. Inwa mvura yakawanda uye inisa mavitamini C. Bvunza chiremba wako nezve expectorant kuchengetedza mapapu akajeka.